Hababka ugu Fiican ee Isku xidhka Gudaha ee WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Hababka ugu Fiican ee Isku xidhka Gudaha ee WordPress
Hababka ugu Fiican ee Isku xidhka Gudaha ee WordPress
Isku xirka gudaha ayaa muhiim u ah WordPress sababo dhowr ah dartood. Kiis daraasad ku saabsan NinjaOutreach waxaa lagu ogaaday in isku-xirnaanta gudaha ay ka caawisay inay kordhiso taraafikada organic 40%.
Tan kale, isku xirka gudaha WordPress wuxuu caawiyaa:
Daawadayaashaadu waxay si fudud ugu socon karaan goobtaada
Waxay dejisaa oo hagaajisaa qaab dhismeedka goobtaada
Ku faafiya isku xirka sinnaanta dhammaan mareegaha internetka
Ku haynaya booqdayaasha goobtaada
Waxay ka caawisaa Google inuu gurguurto goobtaada
Wuxuu dhisaa SEO-gaaga
Maqaalkani wuxuu daboolayaa qaar ka mid ah kuwa ugu fudud, maaha in la yiraahdo hababka ugu fiican ee isku xirka gudaha WordPress. Aan bilowno!
1. Hayso Istaraatiijiyad Suuqgeynta Waxyaabo Weyn
Ilaa aad haysatid waxyaabo badan oo tayo sare leh mareegahaaga WordPress, ma awoodid inaad abuurto xiriiriyo gudaha ah.
Taasi waa sababta ay lama huraan u tahay in la yeesho istiraatiijiyad suuqgeyneed oo weyn. Si kastoy ahaataba, qorista boobyada nuxurku kuma filna. Waa inaad dhab ahaantii qortaa wax qiimo leh si aad u xalliso dhibaatooyinka dhagaystayaashaada.
In kastoo laga yaabo inaad abuurto nuxur weyn, waxay noqon doontaa bilaa macno ilaa ay ka jawaabto su'aalaha ay dhagaystayaashu raadinayaan. Sidaa darteed, ka hor inta aanad abuurin istaraatijiyad suuq-geyneed, hubso inaad barato dhagaystayaasha aad beegsanayso.
Sidoo kale, diirada saara abuurista nuxurka ereyada muhiimka ah Waxa kale oo muhiim ah in lagu muujiyo ereyada muhiimka ah ee saxda ah meelaha saxda ah. Waxaad u shaqaaleysiin kartaa khabiir suuq-geyneed hawshan ama waxaad isticmaali kartaa aaladaha cilmi-baarista ereyada muhiimka ah si aad u koraan taraafikadaada dabiiciga ah.
Marka aad haysato macluumaad ku filan oo ku habboon, waxaad abuuri kartaa xidhiidho badan oo gudaha ah si aad u horumariso istiraatijiyadda isku xidhka gudahaaga.
2. Ka fogow isticmaalka xad dhaafka ah ee qoraalka barroosinka
Dhab ahaantii waa fikrad aad u wanaagsan inaad u isticmaasho qoraalka barroosinka istiraatiijiyadaada isku xirka gudaha. Taasi waxay tidhi, isticmaalka xad-dhaafka ah ee istaraatiijiyadan waxa laga yaabaa inay dib kuugu soo noqoto. Dhab ahaantii, MicrositeMasters.com waxay heshay goobo si xad dhaaf ah loo isticmaalo shuruudaha lacagta lagu ganaaxay tiro aad u badan Google Penguin:
Markaa, iska hubi inaad u isticmaasho qoraalka barroosinka si cadaalad ah intii aad isticmaali lahayd isla qoraalka barroosinka mar kasta oo aad abuurto xidhiidh gudaha ah.
Intaa waxaa dheer, waxaa fiican in la isticmaalo qoraalka barroosinka intii la isticmaali lahaa sawirro isku xiran. Ilaa xiriirinta sawiradu aysan ahayn isha ugu muhiimsan ee isku xirka, sawiraduna ay ka kooban yihiin qoraallo alt-ku habboon. Iska ilaali hagaajinta qoraalka barroosinka. Taa beddelkeeda, isticmaal jumladaha dabiiciga ah, iftiimi, oo ku xidh. Marka laga reebo tan, sidoo kale maaha fikrad fiican inaad ku dhejiso qoraalladaada blogka ereyada muhiimka ah si aan loo baahnayn.
Mana aha oo kaliya istiraatijiyad isku xidhka, talooyinkani waxay ku anfici doonaan markaad bilawdo baloog si aad u qorto qoraallo blog oo yaab leh sidoo kale.
3. Hubi in Xidhiidhiyayaasha Sawiradu leeyihiin Sifooyin kala duwan
Xidhiidhiyayaasha sawirka alt-tagged waxay u adeegaan sidii qoraalka barroosinka ee isku xirka qoraalka waxayna u diri doonaan calaamada darajada matoorada raadinta. Sidaa darteed, iska hubi inaad ku darto qoraallada alt-text ee khuseeya dhammaan sawiradaada.
Haddii aad haysato sawirro badan oo ku yaal goobtaada qalab sida Sawirka SEO Optimizer ayaa ku caawin kara. Plugin Tani waxay si toos ah u abuurtaa magacyada sawirka la xiriira iyo qoraalka alt.
Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa si aad u ogaato xiriirka sawirka ee aan lahayn qoraallo alt ah. Markaad ku xidho API-gooda waxaad awoodi doontaa inaad aragto inta sawir ee maktabadaada warbaahineed aan lahayn wax qoraal ah.
4. Iska ilaali ku xidhidhiyaha Bogagga Heerka Sare
Bogagga heerka sare ee goobtaada sida Homepage iyo Contact Us waxay badanaa ku xiran yihiin liiska navigation-ka. Haddaba, iska ilaali inaad u jihayso xiriirin badan boggan.
Taa beddelkeeda, waa fikrad wanaagsan in lagu xidho qoraalladaada blog-ka. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad xoojiso isku xirka gudahaaga iyo boggaga, kordhinta awooda gurguurashada ee goobtaada, waxayna kor u qaadi doontaa SEO-ga boggaaga.
5. Isku xidhka gudaha ee gacanta
Inkastoo ay qaadan doonto waqti badan, habkani waa mid aad waxtar u leh marka la barbardhigo hababka kale. Si gacan looga geysto isku xirka qoraallada kala duwan ee ku jira qoraalka ugu muhiimsan, WordPress wuxuu leeyahay qalabyo badan oo isku xira. Waxaad isticmaali kartaa ikhtiyaarka isku xidhka sare si aad u baadho boostada oo aad ugu xidho
Haddii aad isticmaalayso Tifaftiraha Classic ama Gutenberg, ku dar qoraal boostadaada ama boggaga. Dooro kelmada aad rabto inaad u isticmaasho sida qoraalkaaga barroosinka ah oo dhagsii astaanta isku xidhka (ee Tifaftiraha Classic waxay ku taal xagga sare ee tifaftirahaaga, Gutenberg gudaheeda popup ayaa ka soo muuqan doona wax yar ka sarreeya qoraalkaaga markaad joojiso qorista). Waxaad ku dhejin kartaa xiriirkaaga halkan ama waxaad bilaabi kartaa inaad ka raadiso boggaga la daabacay ee boggaaga.
Sida ku xusan, ku xidh kaliya waxa la xidhiidha qoraalada barroosinka saxda ah oo ka tag bogga guriga iyo bogga Nala soo xidhiidh.
6. U isticmaal Plugins Isku xidhka Toos ah ee Gudaha
Iyadoo gacanta lagu xirayo qoraalladaada blog-ka waxay u badan tahay inay waxtar badan yihiin, way adkaan doontaa haddii aad boqollaal qoraallo blog ah ku leedahay boggaaga.
Xaaladdaas, waa inaad xisaabisaa bogag shabakadeed oo aan tiro lahayn ka dibna go'aan ka gaartaa boggaga aad ku xidhi lahayd.
Oo tani waa meesha plugins soo galaan ciyaarta!
Si ka duwan habka gacanta ee isku xirka gudaha, isticmaalka plugins ee isku xirka tooska ah waxay ku badbaadin doontaa waqti badan. Waxa kale oo ay fududahay in wax laga beddelo nuxurkii hore ee isku xidhka gudaha marka aad isticmaasho plugins-yadaas.
Waa kuwan qaar ka mid ah plugins-yada aad u isticmaali karto isku xirka tooska ah ee gudaha:
Isku xirka whisper
Dhismaha Xiriirinta Gudaha
Waxay kaa caawin doonaan inaad si toos ah ugu xidho ereyada muhiimka ah ee ku jira qoraalada oo dhan xiriiryo gaar ah.
Qaado Link Whisper, tusaale ahaan:
Link Whisper waxay soo jeedin doontaa isku xidhka gudaha ee khuseeya macluumaadkaaga. Isticmaalka AI, plugin-ku wuxuu ka helaa ereyada muhiimka ah iyo odhaahyada qoraalladaada iyo faallooyinka boggaga, dhejiska, qaybaha iyo calaamadaynta boggaaga.
Si kastaba ha ahaatee, sida caadiga ah waa fikrad ka wanaagsan in la isticmaalo nooca premium ee mid ka mid ah plugins-yada, gaar ahaan haddii aad leedahay bogag shabakadeed oo aad isku xirto. Tusaale ahaan, Link Whisper Free ayaa bixin doonta talooyin iyo warbixin aasaasi ah. Laakiin sifooyinka horumarsan sida wax ka beddelka degdega ah, isku xidhka tooska ah, isbeddelka isku xidhka weyn, iyo in ka badan ayaa ku xaddidan lacagta.
7. Isticmaal Linksyada DoFollow
Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee milkiilayaasha shabakadu ay sameeyaan isku xirka gudaha waa inay wanaajiyaan SEO-ga boggaga kale. Ha dumin adiga oo samaynaya xiriirinta gudaha nofollow.
Xiriirinta DoFollow waxay isticmaashaa sifo HTML ah oo u sheegta mashiinka raadinta si ay u raacaan isku xirka meesha uu u socdo. Tani waxay ka gudbisaa "juice link" ee boggaaga ilaa bog kasta oo aad ku xidho.
Xidhiidhiyayaasha intooda badan, u ogolow qiimaha isku xidhka inuu raaco iyada oo aan xannibayn lagana iman bogagga gudaha. Iyada oo la adeegsanayo WordPress tani waa sahlan tahay, maadaama xiriirinta aad ku darto ay yihiin kuwo horeba u raacaya si toos ah. In kasta oo ay caadi tahay in loo isticmaalo nofollow boggaga qaarkood sida siyaasadda sirta ah, iyo sidoo kale had iyo jeer xiriirrada ku xiran, maadaama ayan muhiim u ahayn SEO.
8. Ha gelinin xidhiidhyo badan boggiiba
Xidhiidhada badan ee aad geliso bogga, waxa yaraanaya casiirka xidhiidhka ay u diri doonaan bogga uu tilmaamayo. Oo haddii nuxurku aanu si fiican u qaabaysanayn, booqdayaashaadu ma rabi doonaan inay hoos u dhaadhacaan liiska aan dhammaanayn ee agabka.
Waxaa intaa dheer, xiriirin aad u badan ayaa u diri kara calaamada spam matoorada raadinta waxayna si xun u saameeyaan awooda boggaaga.
Sidaa darteed, xaddid tirada xiriiriyeyaasha baxaya si kor loogu qaado SEO ee bogagga aad ku xiran tahay. Way fiicantahay in tirada xiriirinta bog kasta lagu hayo 100. In kastoo ay ku xiran tahay
9. Geli Links qiimo leh
Isku xirka guduhu wuxuu dalbanayaa xeelad isticmaale diirada saaraya si aad ugu dari karto qiimo iyo macluumaad. Bixinta qiimaha akhristaha ayaa halkan aad uga muhimsan marka loo eego qiimaha isku xirka ee ku kala firirsan goobta.
Faa'iidada muhiimka ah ee isku xirka gudaha waa in ay kor u qaaddo ka-qaybgalka isticmaalaha. Isticmaalayaasha badanaa waxay gujiyaan isku xirka markay arkaan inuu yahay mid wargelin ah oo ku habboon nuxurka nuxurka.
Dhib malaha xataa haddii ay tahay xidhiidh dibadeed. Akhristayaashu way riixi doonaan haddii ay u arkaan mid xiiso leh.
Xaaladda xiriirinta gudaha, booqdaha ayaa sii joogi doona waqti dheer oo wuxuu ku mashquuli doonaa khibradaada goobtaada.
Xiriirinta nuxurka waxay u diraan calaamad xoog leh mashiinka raadinta iyo sidoo kale isticmaalaha in macluumaadka aad ku xiran tahay ay qiimo leedahay. Akhristayaashaadu way jecel yihiin sidaas awgeed isku xidhka guduhu waxay caawisaa akhristaha. Isla mar ahaantaana, waxaad sidoo kale kor u qaadaysaa SEO-gaaga.
Markaa, isku xidhka guduhu waxa uu shaqayn doona oo kaliya hadii xidhiidhintaadu qiimo u leedahay akhristaha.
10. Geli Xidhiidhada khuseeya
Isku xidhka guduhu waa ka farsamo ka yar waxa aad ku fikirayso. Laakiin taasi macnaheedu maaha inaad ku xidhidhayso isku xidhka dartii. Hubi in lagu xidho nuxurka khuseeya macnaha guud ee isha.
Tusaale ahaan, haddii aad ku leedahay boggaaga bogag ku saabsan sawir-qaadista, ku-xidhka bogga fayaqabka macno ma samaynayso maadaama aanu jirin xidhiidh ka dhexeeya labadooda.
Xariiqda hoose waa - isku xirka waxyaabaha ku habboon.
11. Ha ku Buuxin Isku-xidhaha Gudaha ee La Habeeyay
Xeeladdan ayaa si caan ah loo dhaqmi jiray dhawr sano ka hor. Taasi waxay tidhi, haddii website-kaagu leeyahay kumanaan bogag shabakad ah, waxay ku dhufan doontaa tobanaan kun oo xiriiriye spam ah. Intaa waxaa dheer, makiinadaha raadinta waxay xitaa ciqaabi karaan goobtaada.
Taa beddelkeeda, u fiirso cagahaaga sida aad u samayn lahayd madaxaaga. Ku dar xiriiriyeyaasha waxtarka leh, sida bogga xiriirkaaga ama boggaga bulshada.
12. Isticmaal jajabka rootiga
Burburinta rootiga waa kala sareynta hagidda kaa caawin doonta inaad la socoto meesha aad hadda ku sugan tahay ee mareegaha dhexdiisa, kaa caawinaysa inaad ilaaliso kala sareynta si wanaagsan loo dalbaday.
Google sidoo kale waxay ku talinaysaa rootiga rootiga si kor loogu qaado SEO. Warka wanaagsani waa in mawduucyada ugu wanaagsan ee WordPress ay bixiyaan tan. Tusaale ahaan, dhammaan mawduucyada carruurta Genesis iyo sidoo kale WPExplorer's Total WordPress mawduuca ayaa leh sifadan. Si fudud waa inaad awood ugu gelisaa habaynta mawduucaaga.
Laakiin haddii mawduucaagu aanu bixin rooti jajaban, waxaad ku hirgelin kartaa adoo isticmaalaya WordPress 'Yoast SEO Plugin. Kaliya ku rakib plugin, aad Dashboard-ka, ka dibna u gudub xulashada SEO. Soo hel xiriiriyeyaasha gudaha oo karti doorashada roodhida.
Waa kuwan qaar ka mid ah talooyin kale oo kooban oo ku saabsan isku xirka gudaha WordPress:
Haddii aysan jirin qaab loo isticmaalo ereyada muhiimka ah ee ku jira nuxurka, tixgeli ku darista "Xiriirka La Xiriira" dhammaadka bogga ama boostada.
In kasta oo SEO ay muhiim tahay, samee xiriir kasta oo gudaha ah adoo maskaxda ku haya booqdayaasha iyo gujinta.
Noqo mid sifayn ah oo u sheeg booqdaha inuu ogaado faa'iidada ay leedahay gujinta isku xirka.
Isticmaal erayo ficil oo xoog leh oo soo jiidasho leh.
Haddii aad hayso qoraal cusub oo la xidhiidha qoraal da'weyn oo qiimo sare leh, ku dar isku-xidhaha iyo caksigeeda.
Isticmaal qalabyada sida hawlwadeenka raadinta Google si aad uga baadho boggaga boggaga la xidhiidha.
Xidhiidhinta guduhu maaha inay noqoto hawl culus haddii aad taqaano xeeladda oo aad si sax ah u dhaqangeliso.
Had iyo jeer maskaxda ku hay isticmaalayaashaada iyo gujinta marka aad dhiseyso isku xirka gudaha. Isticmaalayaashu waa inay awood u yeeshaan inay si dabiici ah u riixaan xiriirka si ay u ogaadaan macluumaadka ay raadinayaan. Isku soo wada duuboo, iska ilaali abuurista isku xidhka gudaha dartiis.
Sidoo kale, maadaama WordPress ay bixiso plugins badan si ay kaaga caawiyaan dhismaha isku xirka gudaha - maxaad u isticmaali la'dahay?
Iyo inta suurtogalka ah, ka fogow isku xidhka boggaga heerka sare oo ku hayso tirada guud ee isku xidhka bogga ama dhajinta in ka yar 100.
Raacitaanka talooyinkan ayaa kaa caawin doona inaad dhisto isku xirka gudahaaga iyada oo aan dhib lahayn.
50 Farood oo Casri ah oo lagu Isticmaalo Degelkaaga WordPress 2021